I-Skogsra Ngaba Iimimoya Zamahlathi eSweden Folklore
by UPeter Kohler
Kwizinto ezincinci zokugcina kwiSweden zibanjwe ngaphezulu kwekhulu lama-Norwegian folktales kwiprinta okanye kwifom yesandla. Ukwandisa ngaphandle ukubandakanya lonke iScandinavia kwaye kuya kuthi, kuya kuba yinto eninzi, ngakumbi. Ukuloba kunye nesithethe kubonisa indlela enkulu kunye nesityebi ngayo inkcubeko yokubhala ibali ekhoyo kule nxalenye yehlabathi.
Masibuyele ngoku eSweden size singene emahlathini ayo.
Makhe sibuye emva kwexesha, nangona kungekudala, kude kube yiminyaka emibini okanye amabini amabini anelisekile. Kukho uxolo apha ngemithi, umoya ococekileyo nococekileyo, isibhakabhaka esiphakamileyo ngaphezu kwebala elihlaza okwesibhakabhaka okanye elimpunga - kunye nobumnyama obunzulu, obunzulu, obunzulu kakhulu ngoku, ubona siphumelele iintsuku, ekuzingeleni okanye ukutshisa amalahle, kwaye ukuthula kuye kwaba nzima kakhulu kangangokuba asibonakali sivakala izandi zethu. Siyazi ukuba sikhuselekile kwii trolls, kuba ngoxa kubakho iqela elikhulu kubo ngaphesheya kwentaba, akuzange kubekwe ukuba kukho na apha kufuphi. Kodwa i-skogsra, ah, kufuneka sihlale silumkele i-skogsra.
Kanye njengoko i-sjora ingumoya wamanzi, ehlala kwimifula kunye namachibi kunye nokuba nefuthe elikhulu apho, i-skogsra yimimoya yehlathi, nganye inendawo yayo. Ziyaziwa kakhulu ngabantu abaholayo. Bonke abaye babona ingxelo enye yokuba unembonakalo yowesifazane omhle xa ebonwa phambi; ukusuka ngasemva ukhangeleka njengomthi ongenamthi.
Ngokuqhelekileyo udibanisa iinwele zakhe, ngamanye amaxesha unomsila. Ngokuqinisekileyo ayinakulinganiseki, le ntsana ibonakala ngathi kulula ukunika inzuzo enkulu njengengxaki. Ukuba umntu uyamkelwa ngu-skogsra omnye unokufumana ukuzingela okuhle. Ngakolunye uhlangothi, xa inkabi yakho okanye inja yokuzingela ilahleka, okanye ulahlekelwa indlela yakho ehlathini, kukho amandla angaphezu kwamandla omsebenzi emsebenzini.
Siza kujonga enye yamabali amaninzi kunye neengcamango malunga ne-skogsra.
Kwakukho indoda etshatileyo. Ngesinye isikhathi xa ekhangela ezinye iinkomo wadibana ne-skogsra. Ayinakukwazi ukumelana nesilingo, wahamba naye kwaye wayenaye ngokuhlwa emva kwayo. Kungekudala nje kwaqala ukuba lukhulu kakhulu kuye, ukucoca kakhulu, kodwa akanakuze amkhanye. Wayengakaze ambone emva kwakhe (ed: Ndiyicinga ukuba akazange abone ikopi ye-Kama Sutra!). Ekugqibeleni, bekumele kube nzima kuye; Indoda ehlwempuzekile yaxhamla kakhulu kwaye yayingenangqondo yokuba yayingeke ihambe. Wayengazi ukuba benzani.
Ngesinye isikhathi waya kwi-skogsra waza wambuza ukuba umele enze ntoni ngenkunzi yenkomo eyayitshilo. Wamxelela ukuba inkunzi yenkomo yayiyingxaki enjalo; Akazange enze nto ngaphandle kokukhupha iinkomo kwaye akayi kuyeka, ngoko ngoku iilwanyana zazisusa ngokupheleleyo. I-Tibast, wathi, kwaye i-vandelrot yayiza kuqhatha. (I-Tibast, okanye i- Daphne mezereum- ngoFebhuwari uDaphne; kunye ne-vandelrot, okanye i- Valeriana officinalis - i-Valerian ingcambu, imithi echazwe kule ndlela yaseMzantsi yendaba.
Ngoko wafumana i-tibast kunye ne-vandelrot kwaye wayibhalela yona waza waya ngaloo mini ukuza kumhlangabeza.
Ngokukhawuleza xa embona wathi, "I-Tibast kunye ne-vandelrot inesiqiniseko; ndize ndixelele unyango!" Kwaye, wajika, waza wambona emva, waza wanyamalala.
Indoda kule ngqungquthela iyaphumelela ingqumbo, kwaye le yimiyalezo yezinto ezininzi ezinjalo. I-skogsra, nangona xa uphatha kakuhle, unokuba neenjongo ezimbi, eziphazamisayo, kwaye ubukho babo buzalisekile. Ingqungquthela yale ngqungquthela inikezela ngcebiso malunga nendlela yokuphepha, ukunqoba okanye ukusinda kulezi zimo kunye neempembelelo - njengokuba iimbali ezisemadolobheni zanamhlanje zidlala kwizilingo, ukwesaba kunye neengcamango zalabo abava iindaba okanye baxelele .
Ngoko ungabuyela ekhaya ngoku kwaye unike ixesha - ube nohambo olukhuselekileyo! Ngenxa yam, kubonakala ngathi ndiziva ndingenakunqwenela ukuhlala apha ehlathini ixesha elide, kwaye ndidibana nenye yee-skogsra.
Isilathisi sokulumkisa seVirus esibizwa ngokuthi "UmSilamsi omnyama kwiNdlu eNtshonalanga"
Izinto ongazange wazi ukuba ifowuni yakho yeselula ingayenza
Ukuqonda ulwahlulo namhlanje
Iimpawu ezi-10 ezimnandi malunga ne-Ladybugs
Imfazwe YaseMelika: Imfazwe yaseGettysburg
I-Biography yeSalvador Dalí, iSyrealreal Artist
Iingoma ezili-10 eziphezulu ngemvula